Qaar ka mid ah fanaaniinta Kooxda Qeylo dhaan oo maanta ku tamaashaday Xeebta Liido
Updated About:320 days ago 0
Xeebta Liido oo maalinta jimcaha ay u damaashaad tagaan dadweyne fara badan, si ay ugu dabaashaan, ayaa waxaa waxaa maanta dadkii halkaas tagay ka mid ahaa Mas’uuliyiin, saraakiil, qaar ka mid ah Fanaaniinta qurba joogta ee Kooxda Qeyla-dhaan iyo madax ka tirsan Ururada bulshada rayidka.
Dadkii u damaashaad tagay ayaa waxaa ka mid ahaa Fanaaniinta Jooqle Shire Jaamac, Muusikiistaha C/xakiin Farayare, Gudoomiyaha Hey’adda CCD Ciise Axmed Cumar, Gudoomiyaha degmada Warta Nabada Deeqo C/qaadir, Gudoomiyaha degmada H/wadaag Jacfar, Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab, Taliyaha qeybta bartamaha booliska Jen. Garaad, iyo dad ka yimid qurbaha.
Fannaaniinta Jooqle iyo C/xakiin Farayare ayaa sheegay in booqashadooda xeebta Liido iyo sida loo soo dhoweeyay iyo waliba farxadda dadweynaha Muqdisho ay ku soo dhoweeyeen ay si weyn uga maqsuudeen, isla markaasina waxay dareenkooda ku cabireen xusuustoodii ugu sareysay inay ka mid tahay.
Maqaaxi kuwa laga cunteeya oo laga furay Xeebta ayaa waxaa ka cunteeya dadka u soo dabaal taga xeebta, iyadoo maqaaxida ay fureen dad qurbaha ka yimid oo ugu tala galay in magaalada ay qeyb ka qaadato horumarkeeda.
Dhinaca kale xeebta Liido oo inta badan maalinta Jimcaha ay dadweynaha isugu yimaadaan si ay ugu damaashaadaan isla markaana ugu dabaashaan xeebta, ayaa waxaa sidoo kale dabaaldegii maanta ka soo qeyb galay xubno isugu jira rag iyo haween oo iyana ka yimid qurbaha.
By C/llaahi Maxamed Macalin (Naanow)